Waa maxay Xarunta Xakamaynta ETD maxaase loogu talagalay | Madasha Mobile -ka
Waa maxay Xarunta Xakamaynta ETD maxaase loogu talagalay?
Cristian Garcia | | Nidaamyada hawlgalka, Windows
Waa maxay Xarunta Xakamaynta ETD? Su'aal fiican, sax? Dad badan Windows 10 adeegsadayaasha ayaa tan la yaabay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay maadaama ay tahay hal adeeg oo dheeri ah oo ka muuqda nidaamka qalliinka ee aad rakibtay. Waa maxay dhibku? in Xarunta Xakamaynta ETD ay badanaa la timaaddo dhibaatooyinka nidaamka qalliinka, wax noo keenaya xanaaq. Sidaa darteed meeshaan haddaad isweydiiso su’aashaas, waxaa laga yaabaa inaad dhibaato ku jirto.
Runtii waxaan ka hadleynaa Xarunta Xakameynta ETD magaceeda oo buuxa si joogto ah, laakiin waxaad u imaan kartaa inaad u hesho EDCtrl.exe. Faylkaan sida aan awoodnay inaan ogaano oo baarno ayaa iska leh ama waa halkii, qayb software oo aan lahayn muhiimad badan ELAN Smart-Pad, oo ka socota shirkadda ELAN Microelectronics. Taasi waa, shirkad, sidaad horeba u ogayd, wixii aan hore kuugu sharraxnay, waxay u heellan tahay soo saaridda guddiyada taabashada.
Annaga oo aan sii dheereyn waxaan ka hadli doonnaa ogeysiiskan in ka muuqda maamulaha hawshayada iyo xitaa mararka qaarkood shaashadahayaga, si aad wax badan uga ogaato oo aad u joojiso qashqashaadda, ama taa lidkeeda, isku day inaad hagaajiso oo aad qiyaasto waxa dhaca marka Xarunta Xakameynta ETD lagu hawlgeliyo kombuyuutarkeena. Waxa cad waa inaan xallin doonno su'aasha ku saabsan waxa Xarunta Xakameynta Etd ay ku jirto faqradaha soo socda.
1 Waa maxay Xarunta Xakamaynta ETD?
2 Miyaan ku qasbanahay inaan tirtiro ama tirtiro Xarunta Xakamaynta ETD sabab kasta ha ahaatee?
2.1 Sida loo naaquso Xarunta Xakamaynta ETD
Waa maxay Xarunta Xakamaynta ETD?
Asal ahaan waxa Xakamaynta ETD ay tahay shaqeynta dheeraadka ah ee nidaamka hawlgalka taas waxay u oggolaanaysaa guddida taabashada laptop -ka inay si fiican u shaqeeyaan. Waa maxay guuldarradu ama maxaa na khuseeya? in barnaamijyo badan oo firewall ama antivirus ah ay u arkaan inay tahay guuldarro ama qalad taasina ay na cabsi gelin karto.
Dhab ahaantii, sida aad ku arki karto sawirka, waxay had iyo jeer ka muuqataa maamulaha hawsha. Mararka qaarkood ma arki doontid inay ka hawlgasho meel kale oo aan ahayn maareeyaha hawsha sababtoo ah waxay ku jirtaa asalka. Si aad u gasho maamulaha hawsha, kaliya waa inaad riixdaa oo aad gacanta ku haysaa xakamaynta + alt + tirtir isku -darka ka dibna ka dooro maamulaha laftiisa menu -ka muuqda.
Miyaan ku qasbanahay inaan tirtiro ama tirtiro Xarunta Xakamaynta ETD sabab kasta ha ahaatee?
Waxba ma laha. Xarunta Xakamaynta ETD sida oo kale si toos ah wax uma taabanayso. Maalin kasta, ma arki doontid gabi ahaanba wax ka mid ah howshaan taabashada guddiga ee ay bixiyaan Windows iyo laptop-kaaga. Sidaa darteed, waad ka saari kartaa dhammaan codsiyada la xiriira Xarunta Xakameynta ETD. Laakiin sidoo kale waxaad haysataa ikhtiyaar inaad ku curyaamiso haddii aad doorbido. Ma aha in wax walba la rabo in la saaro oo la tirtiro. Naafada ayaa ku filan.
Sida loo naaquso iyada oo aan la tirtirin? Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso. Waa hagaag, waxaan kuu sharxi doonnaa sida loo naaquso Xarunta Xakamaynta ETD si aadan u tirtirin wax.
Sida loo naaquso Xarunta Xakamaynta ETD
Nidaamku Ma Heli Karo Jid Cad - Sida Loo Hagaajiyo Daaqadaha
Sidaan kuu sheegnay, waad curyaamin kartaa waxna ma tirtiri doontid. Waa wax aad u fudud oo aad ku guuleysan doontid adigoo raacaya dhowr tallaabo oo aan hoos ku siin doonno. Waxaan u raacnaa iyaga:
Marka hore, waa inaad riixdaa isku -darka furaha caanka ah ee aan had iyo jeer isticmaalno marka PC -gaagu shil galo.: Xakamaynta + Alt + Del. Hadda shaashaddaada Windows ayaa buluug isu beddeli doonta oo ku tusi doonta menu. Dooro ikhtiyaarka maareeyaha hawsha. Hadda, markaad ku jirto maareeyaha hawsha, midig-guji sumadda ama ikhtiyaarka geedi socodka Xarunta Xakamaynta ETD ee aad aragto firfircoon oo guji ikhtiyaarka hoos-u-dhaca si aad u curyaamiso. Hawshaan oo dhan ka dib iyo dhammaystirkeeda, kaliya waa inaad dib u bilowdaa kombiyuutarkaaga si nidaamka qalliinka uu ugu milmo isbeddelada.
Waxaan ku talinaynaa taas dib u hubi maareeyaha hawsha dib uma bilaabi doonto hawsha, haddiiba ay dhacdo. Ma aha in gebi ahaanba la tirtiro dhibaatooyin dheeri ah maadaama uusan naafo ahayn.
Haddii ay sidaas kuu shaqayn weyday sababtoo ah sababo aadan awoodi karin inaad gaarto maareeyaha hawsha, waxaan kuu sharxi doonnaa hab kale oo toos ah si aad u curyaamiso:
Si aad ugu bilowdo habkan cusub, waa inaad riixdaa furayaasha Windows + R iyadoon la siidaynin wakhti kasta. Hadda waxaad arki doontaa in uu kuu furmo daaqad sida tan aan halkaan sare dhignay. Hadda ku qor "taskmgr" berrinka si aad u buuxiso oo riix badhanka galitaanka ee keyboard -kaaga. Tani waxay furi doontaa maamulaha hawsha sidaad ku samaysay tillaabooyinkii hore ee habka kale, si fudud ayaa toos uga badan isticmaalka Kontoroolka caadiga ah + Alt + Delete.
Hadda markaan gudaha ku jirno maareeyaha hawsha, waxaad arki doontaa dhowr tab oo xagga sare ah. Soo hel tabka guriga la yiraahdo oo geli. Hadda waxaad arki doontaa codsiyo kala duwan oo aad firfircoon tahay, qaarkood waxay ku jiri doonaan gadaal, kuwa kalena ma yeeli doonaan. Waxaa laga yaabaa inay kuu yaqaanaan ama laga yaabo inaadan aqoon u lahayn. Halkaas, kaliya waa inaad ka heshaa Xarunta Xakameynta ETD, taas oo ah, waxqabadka arjiga guddiga taabashada, oo ay tahay inuu u muuqdo mid firfircoon mar walba. Hadda riix Midig ku guji jiirka iyo hoos-u-dhaca ee muuqda guji naafaynta ama naafo, taas oo ku xidhan haddii aad ku haysato Ingiriis ama Isbaanish.
Sida looga hortago in kumbuyuutarku seexdo Windows 10
Intaas ka dib, wax walba mar kale xir oo si caadi ah u dhaq. Haddii aad rabto in isbeddelada la adeegsado laga bilaabo wakhtigaas, waa inaad dib u bilowdaa laptop -kaaga nidaamka qalliinka si aad u adeegsato waxaad hadda codsatay.
Waxaan rajaynayaa inaad la qabsatay fikradda ah waxa saxda ah Xarunta Xakameynta ETD sidoo kale loo yaqaan EDCtrl.exe on your laptop. Haddii aad wax dhib ah ka qabto shaqadan guddi taabashada noo soo sheeg si waxaan si qoto dheer u baari karnaa mawduuca oo aan dhammaystiri karnaa maqaalkaama leh xal dheeri ah oo suurtagal ah. Mabda 'ahaan, curyaaminta, khaladaadka ay kaa siinayso kombiyuutarka waa inay dhammaadaan. Intaas oo dhan, waxaan rajaynaynaa inaan ka jawaabnay su'aasha ah waa maxay Xarunta Xakamaynta ETD. Waxaan kugu arki doonaa maqaalka Madasha Moobilka ee soo socda!
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Nidaamyada hawlgalka » Waa maxay Xarunta Xakamaynta ETD maxaase loogu talagalay?
Xagee laga arki karaa South Park: dhammaan xilliyada
Waxa la sameeyo haddii magaca isticmaalaha aan lagu xaqiijin karin Minecraft